Isifundo se-Bust Cake Tutorial - I-Sugar Geek Show - Ibhulogi
Isifundo se-Bust Cake Tutorial
Ngizokuxwayisa manje, lokhu okuthunyelwe kuyisidomu. Uma ungekho kuyo isikhathi eside ukudonsa ngalesi sikhathi ungahle uphenduke manje bese ubuyela kunoma yini obukwenza ngaphambi kokukhubazeka kulokhu okuthunyelwe kwebhulogi. Uma ukulungele, ngeke uzisole! Namuhla sizokukhombisa igxathu negxathu indlela yokubaza umqubu wesifazane ngaphandle kwekhekhe, ikhekhe langempela. Ake sifike kukho ngabe?
Okokuqala, udinga isakhiwo ukuxhasa ukuqhuma nekhanda lakho. U-Liz wakhe isakhiwo ngebhodi lamapulangwe ayi-12,, i-1/2 fl flange yensimbi ayifakile ebhodini, i-1/2 ″ i-adaptha yesilisa nepayipi le-1/2 ″ le-PVC.
Uzofuna ukukala i-PVC yakho mayelana nokuthi ufuna ukuthi phezulu kwamahlombe kube kuphi. Kuyasiza ukuphrinta isifanekiso ongalinganisa kuso. Uma uyi Ilungu lePrimiyamu noma Elite ye-Sugar Geek Show, ithempulethi esetshenziswa nguLiz kulokhu kukhonjiswa iyatholakala kuwe nabathandekayo Isifundokazi saseGibhithe iBust Cake Tutorial . Usebenzisa abasiki be-PVC, sika i-PVC yakho ekuphakameni okulungile.
Mboza i-flange yakho ne-PVC ipayipi nge-aluminium foil tape. Lokhu kungatholakala ezitolo zehardware zasendaweni, i-Home Depot, eLowe's, into enjalo. Ipayipi le-PVC liphephile ekudleni kepha konke kubonakala kunamathela kuthephu ye-aluminium foil kangcono. Akunandaba, udinga ukumboza i-flange yensimbi.
Faka i-buttercream encane ebhodini lakho ukuze wenze njengeglu yesendlalelo sakho sokuqala sekhekhe.
U-Liz ususelwe kusayizi wezendlalelo zakhe zekhekhe kusayizi wesifanekiso sakhe. Usebenzise ikhekhe leshidi elihhafu kuzendlalelo ezimbili zokuqala nengxenye encane phezulu kakhulu ukunciphisa imfucuza. Uhlala njalo ufuna ukuzinika igumbi lokuzibaza. Uma wenza ikhekhe lakho libe usayizi oqondile ofuna liqedwe ngeke ube nendawo yokuqopha.
Faka izendlalelo zakho zekhekhe, zilandelwe ungqimba oluvulekile lwe-buttercream. Kulula ukusebenzisa ikhekhe eliqinile, eliqinile lokuqopha njenge Ikhekhe Lekhekhe Recipe U-Liz usebenzisa lapha.
Sebenzisa ithempulethi yakho futhi ukuthola umbono wobubanzi kusuka ehlombe uye ehlombe futhi unqume noma ikuphi ukweqisa okungadingekile uzinikeze igumbi elincane lokuzungeza.
Nquma ububanzi ukusuka emuva kuye phambili. U-Liz ulinganiselwa ku-5 ″ phezulu. Sika emuva engela elincane bese phambili nge-engeli eyeqise kancane. Khumbula, sinezigaxa zezintokazi zokuzibaza.
Sebenzisa ithempulethi yakho futhi ukunquma ukuthi izingalo zizoqala kuphi.
Sika inothi lekhekhe ohlangothini ngalunye lwalezo zindawo.
Yenza okufanayo nangemuva, ukulingise kancane ubheke endaweni engemuva.
Kancane uzungeze indawo engemuva.
Sika inani elincanyana ngaphansi kwengaphambili lamabobs.
Manje ngokuyisisekelo qala ukuzungeza noma yimaphi amakhona abukhali noma imiphetho. Phela siyindilinga.
Sika inothi engunxantathu ngaphandle kwesifuba phakathi kwama-boobs. Zungeza phezulu kwendawo yesifuba futhi.
Qhubeka uqoqe noma imiphi imiphetho enokhahlo kakhulu futhi engabukeki iyindalo.
Uma usuphethe ukuma kwakho okuyisisekelo uzosebenzisa kahle ezinye zalezo zinsalela zekhekhe! Faka kancane ushokoledi ganache esitsheni esigcwele isigaxa sakho sekhekhe futhi usishelele ndawonye ngezandla zakho. Ukugqoka amagilavu ​​kwalokhu kunconyelwa ukuhlanzwa kalula.
Iresiphi yeGanache Chocolate
Ingxube yakho kufanele ibukeke kanjena. Akuhlanganisiwe ngokuphelele ku-mush kepha kuthe ngandlela thile kumakwe izigaxa zekhekhe ne-buttercream namanje. Wenze ubumba lwekhekhe oluzokuqeda manje ukwakheka kwakho!
Kuleli qophelo ungangeza ikhanda lakho (elivamise ukuqedwa). Ngesonto eledlule ngithumele i- Ungasisebenzisa Kanjani Isifundo Sesikhunta Skull Chocolate ngale njongo. Bheka lokho okuthunyelwe ngezithombe ngezinyathelo nezinyathelo nemiyalelo futhi imininingwane iboniswa kuvidiyo engenhla!
Linganisa ukuphakama ngesifanekiso sakho bese usisika kubude obufanele. Ngemuva kwalokho vele unamathisele lapho!
Manje usungaqala ukusebenzisa ubumba lwakho lwekhekhe ukudala intamo yakho. Yakha intamo kusuka phansi kogebhezi uye emzimbeni bese ufaka eminye imisipha yama-trapezoid namahlombe.
iresiphi yekhekhe le-alimondi ngokuhlanganiswa kwekhekhe
Qhubeka wengeze ubumba lwakho lwamakhekhe noma yikuphi lapho ludinga ukwakhiwa noma umumo uphelelisiwe futhi waqoqelwa ezilinganisweni ezifanele.
Ungakhohlwa ukuxhuma intamo phansi komhlathi nomthambeka.
Faka enye incazelo kwithambo lekhola.
Sika ama-notch amancane lapho izingalo zihlangana khona ngemuva ukwengeza ubukhulu obengeziwe ebhusheni lakho.
Yenza okufanayo ngaphambili.
Qiniseka ukuthi uxhuma ngemuva kogebhezi nomgogodla nge-engela efanayo oyenzele ingaphambili lentamo ngakho-ke kubukeka kungokwemvelo.
Uma usujabule ngokuma kwakho kukonke ungamboza konke ukuqubuka ungqimba lwe-chocolate ganache. I-chocolate ganache inconyelwa ukumboza amakhekhe aqoshiwe ngenxa yokuzinza okungeziwe.
Sebenzisa i-acetate ebushelelezi njengaleyo evela Imisebenzi emisha yoshukela ukushelela ingubo yakho ye-ganache. Ngemuva kokungeza ijazi lakho le-ganache uzopholisa ikhekhe lakho cishe imizuzu engama-20 efrijini bese ufaka ijazi lokugcina ngendlela efanayo ulishelele kahle ngezandla zakho nangamanzi amancane afudumele uma kudingeka.
Futhi lapho unayo! Izisekelo zokuqopha umqubu wesifazane ngaphandle kwekhekhe. Ukuze uthole okwengeziwe ukujula kokufundisa ukubaza okokufundisa ube yilungu namuhla bese ubheka okuningana okufanele sikunikeze!
Ngiyabona ukuthi kungabonakala njengomlingo manje kepha siyazi ukuthi ungakwenza! Sebenzisa yethu Isikhunta Skull Chocolate bese uyidubula, ngibheja ukuthi uzomangaza wena! Njengenjwayelo, siyathanda ukubona izithombe zakho ngakho-ke sabelane ngazo uma unikeza ikhekhe le-bust elibaziweyo!
UShannon Patrick Mayes
UShannon ungumnikazi we Inkampani yeSweetArt Cake eLovell, eWyoming. Umsingathi wesiteshi se-YouTube Indawo Emnandi , UShannon ubonisiwe komagazini abaningana kufaka phakathi ikhava ye- Amakhosi Wekhekhe . Umbhali webhulogi nomnikeli ku-The Sugar Geek Show.
Iwebhusayithi Facebook Instagram
ikhekhe lebhokisi ikhekhe linambitheke njengokuzenzela
indlela yokuqinisa ukhilimu ophehliwe
ukuhlanganiswa kwekhekhe elibomvu le-velvet kusuka ekuqaleni
kanjani ukwenza rose gummy amabhere